Yini ongayibona eSarlúcar de Barrameda | Izindaba Zokuhamba
Lola curiel | | España, General, Amabhishi, Yini ongayibona
ISanúcar de Barrameda, etholakala ngaphambi nje kweDoñana National Park, Ingelinye lamadolobha avakashelwa kakhulu ogwini lwaseCádiz. Yasebenza kusukela ezikhathini zangaphambi komlando futhi ngenxa yesimo sayo samasu, yayihlala amaTartessos, kwakuyindawo eyasungula indlu enhle yaseMedina Sidonia, enye yezindawo ezibaluleke kakhulu eSpain, futhi yasungulwa njengephuzu eliyinhloko lokuthunyelwa kwamanye amazwe wezimpahla ngesikhathi sekoloni laseMelika. Namuhla, imigwaqo yayo igcina futhi ibonakalise wonke lawo makhulu eminyaka omlando.
Ingcebo yamasiko, yomlando kanye neyemvelo yeSanúcar de Barrameda ikwenza kube indawo ekahle ukuvakashela eholidini. Amabhishi, izikhumbuzo, impilo yasebusuku nemigoqo yokudla kahle, inazo zonke izithako ezidingekayo ukuze ungakwazi ukubhoreka. Uma ungazi ukuthi yini okufanele uyibone nokuthi yini okufanele uyenze eSanúcar de Barrameda, awukwazi ukuphuthelwa yilokhu okuthunyelwe lapho uzokuthola khona bhala ngezindawo zokuheha izivakashi ezizobaluleka ekuvakasheleni kwakho leli jewel le Cádiz.
1 Vakashela iBarrio Alto
1.2 IHholo LaseLa Merced
1.4 Isango iRota
1.5 UMama wethu wase-O Parish
1.6 Isigodlo saseMedina Sidonia
1.7 Isigodlo sase-Orleans-Bourbon
1.8 Inqaba yaseSantiago
2 Amabhishi amahle kakhulu eSarlúcar de Barrameda
2.1 IBonanza Beach
2.2 Amabhishi aseLa Calzada naseLas Piletas
2.3 Ibhishi laseJara
3 IPlaza del Cabildo
4 Imakethe yeBonanza
5 Vakashela iDoñana National Park usuka eSanúcar
6 IFlamenco eSarlúcar
6.1 Ngingabona kuphi umbukiso we-flamenco eSanúcar de Barrameda?
6.1.1 Kusekhona Ukuphila Ukubuyela Emuva
6.1.2 Iklabhu leFlamenco iPuerto Lucero
6.1.3 Igumbi leRociera El Rengue
7 Izitolo zewayini zaseSanúcar
7.1 Amanye ama-wineries ahlela ukuvakashelwa ezikhungweni zawo
7.1.1 IBodegas Hidalgo La Gitana
7.1.2 IBodegas La Cigarrera
8 Ungadla kuphi eSanúcar de Barrameda
8.1 Indawo yokudlela yaseCasa Bigote
8.2 Ibha Casa Balbino
8.3 Shwi Nomtekhala
Vakashela iBarrio Alto
IBarrio Alto de Sanlúcar yingxenye endala yedolobha, eNkathini Ephakathi yagxilisa wonke umsebenzi futhi yavikelwa ngodonga. Ukuhamba ezitaladini zalo kunguhambo lweqiniso oluya esikhathini esedlule futhi kuyithuba elihle lokufunda ngokubaluleka kwedolobha elisogwini njengendawo yamasu okuhweba.
Izakhiwo zenkolo, izingadi, ama-winery nezigodlo, ikhona ngalinye linendaba. Okulandelayo, ngizokukhombisa ukuthi yini okumelwe uyenze ohambweni lwakho ngeBairro Alto.
Kutholakala eCuesta de Belén, eduze kwePalacio de Medina Sidonia, iLas Covachas noma iTiendas de Sierpes kwakuyi imakethe endala yabathengisi. Ngesitayela se-Gothic esiphawuliwe, bayalelwa ukuthi bakhelwe ekupheleni kwekhulu le-XNUMX nguMbusi wesibili waseMedina Sidonia, u-Enrique Pérez de Guzmán y Meneses, komunye wemigwaqo ngaleso sikhathi, kwahlanganisa ingxenye enkulu yezentengiselwano zikaSarlúcar. Lesi sakhiwo siheha ukunakekelwa kwegalari yaso ebanzi yamakhothamo kanye nefriji enhle ehlotshiswe ngama-dragons.
IHholo LaseLa Merced
Yakhiwa ngekhulu le-XNUMX futhi yayisetshenziswa njengendlu yezindela futhi, kamuva, njenge-hermitage. Njengamabhilidi amaningi omlando wedolobha nezikhumbuzo, i-Auditorium yaseLa Merced nayo yakhiwa ngenxa yokuphathwa kwendlu enhle yaseMedina Sidonia.
Ngawo-80, isigodlo esidala sezindela sasisesimweni esiphakeme sokulungiswa. Ngakho-ke, amaDuchess ama-XXI aseMedina Sidonia anqume ukunikela ngendawo kuMkhandlu Wedolobha laseSanlúcar futhi njengamanje isebenza njengehholo likamasipala kanye nendlunkulu yeDluliselo lamaSiko oMkhandlu Wedolobha kanye ne-Sanlúcar International Music Festival.
I-Basilica of Our Lady of Charity iyalelwe ukuthi yakhiwe yi-VII Duke yaseMedina Sidonia. Umsebenzi wawuqala ngo-1609 kuya ku-1613. Ithempeli lalilawulwa abefundisi ababemiswe ngqo yindlu ehloniphekile.
Ikhomishini yanikezwa u-Alonso de Vandelvira, umakhi omkhulu we-Casa de Medina Sidonia, owanikela ngendawo engcwele isitayela sobuciko obusobala. Ingaphambili lesonto lisangulukile futhi liqhakambisa umbhoshongo omuhle wensimbi ohlobisa ngaphandle. Ngaphakathi, i-dome ecishe ibe yisicaba ivumela ukukhanya kudlule emgodini othi, phezulu, ukhanyise i-altare elikhulu.
ISango LikaRota kwakungomunye weminyango yokungena edolobheni elidala, ezungezwe yiGuzmán el Bueno. Inikwe igama layo ngokuthi Ngaleso sikhathi odongeni, umzila oxhumanise iSanúcar de Barrameda neRota, isigodi esingumakhelwane. ESarlúcar kwaziwa njenge "I-Arquillo" nezinsuku zalo zokwakhiwa kusukela ngekhulu le-XNUMX kuya kwele-XNUMX.
UMama wethu wase-O Parish
Ipharishi Lenkosikazi Yethu ye-O YiGreater Church yaseSanúcar de Barrameda. Izakhiwo zayo zakhiwa kusukela ngo-1603 futhi zenziwa ngenxa yokuphathwa kweDuchess yokuqala yaseMedinaceli, u-Isabel de la Cerda y Guzmán, owayengumzukulu kaGuzmán el Bueno.
Ngesitayela sikaMudejar nesitshalo esingunxande, ithempeli ligqame ngamatshe alo esihlabathi amatshe, ahlanganiswe izingubo ezinhle zezindlu ezinhle zaseGuzmán nase de la Cerda. Ngaphakathi, uphahla lwakwaMudejar ludonsa wonke amehlo.
Isigodlo saseMedina Sidonia
Isigodlo Sezikhulu ZaseMedina Sidonia Yakhiwa ngekhulu le-XNUMX ngesiyaluyalu samaSulumane sekhulu le-XNUMX. Izitayela ezahlukahlukene zokwakha zihlala ndawonye esigodlweni, ukulawula isitayela seMudejar, sokwakhiwa kwakudala, kanye neRenaissance. Ingaphakathi ligcwele imisebenzi yobuciko etholwe yindlu yodumo. Imidwebo yabaculi besimo sikaZurbarán noFrancisco de Goya iyagqama. Insimu inehlathi elingu-5000 m2 futhi kungenye yamatshe ayigugu amakhulu esakhiwo.
Namuhla, isigodlo siyikomkhulu lenhlangano engenzi nzuzo iFundación Casa Medina Sidonia futhi Ihlala elinye lamahostela amele kakhulu futhi ayiqiniso eSanúcar de Barrameda.
Lesi sigodlo sakhiwa ngekhulu le-XNUMX, njengoba ukuhlala kwehlobo kwamaDukes aseMontpensier, U-Antonio de Orleans noMaría Luisa Fernanda de Borbón. Namhlanje u esinye sezakhiwo eziheha kakhulu edolobheni, esebenza njengoMkhandlu WeDolobha waseSanlúcar de Barrameda.
Isitayela sayo sezakhiwo nezingadi zayo ezinhle ziyayenza umsebenzi oyingqayizivele wobuciko, I-fao yesitayela se-neo-Mudejar iqhathanisa ne-Italianism ekhona kwezinye izindawo zangaphakathi. Izitayela ezinjengeRococo, eyaseGibhithe noma eyamaShayina, zikhona kwamanye amakamelo esigodlo.
Eyakhelwe ngekhulu le-XNUMX ngaphansi kokuphathwa kweCasa de Medina Sidonia, ICastillo De Santiago ivelele ngesitayela sayo sekwephuzile seGothic kanye nokugcinwa, okufana neTorre de Guzmán el Bueno yaseCastle of Tarifa. Le nxanxathela yayisebenza njengenqaba yaseducal futhi yavakashelwa abantu ababalulekile abama eSarlúcar ngenxa yendawo yayo enelungelo, njengoColón, uFernando de Magallanes kanye no-Isabel la Católica uqobo.
ICastillo De Santiago ngokungangabazeki ingenye yalezo zindawo okufanele uzibone edolobheni. Okwamanje izindlu ngaphakathi kwe- Imyuziyamu yezimpahla nezokuvikelaUkufinyelela kubo bobabili kufakiwe nethikithi lokungena elijwayelekile enqabeni. Ngaphezu kwalokho, inezingadi namakamelo amaningi anikelwa ukusingatha zonke izinhlobo zemikhosi.
Amabhishi amahle kakhulu eSarlúcar de Barrameda
ISanúcar yidolobha elihlinzeka ngezinhlelo eziningi kanye namathuba okuthi, yize uyindawo esogwini, kufanele ukuvakashela nasebusika. Noma kunjalo, Uma uya edolobheni ehlobo futhi ufuna ukuphunyuka ekushiseni kwaseningizimu, ungaya emabhishi amahle kakhulu eSanúcar de Barrameda, jabulela ilanga bese uzipholele ngokugeza kahle.
Lutholakala emlonyeni weGuadalquivir, lolu lwandle luthandwa kakhulu ngabantu bendawo futhi, ngokumangazayo, aluhanjelwa kakhulu abantu bangaphandle. Ikona ibhishi eliyiqiniso impela, elithulile, elinesihlabathi esicacile namanzi azolile kakhulu. Eduzane nogu, uzobona izikebhe ezincane, eziphethwe abadobi bendawo. Yize kungesilo ibhishi elingcono kakhulu ukugeza, lilungele ukuhamba ngezinyawo, ukuphuza kubha yolwandle nokujabulela umoya wasolwandle.
Amabhishi aseLa Calzada naseLas Piletas
Womabili amabhishi, atholakala eduze komunye nomunye, mhlawumbe awaziwa kakhulu eSarlúcar. Imijaho yamahhashi edumile ibanjelwa lapha ngo-Agasti, elinye lamasiko abaluleke kakhulu edolobheni.
Izinga lokuhlala kwamabhishi kuvamise ukuba phezulu, kepha kufanelekile ukuya kubo, ikakhulukazi uma ufuna ukusizakala ngazo zonke izinhlobo zezinsiza nezinsiza, ngenkathi ujabulela ubuhle bendawo.
Uma ubheke ukuba kude nokuxokozela kwedolobha bese uchitha usuku endaweni engonakalisiwe, iPlaya de la Jara izokujabulisa. Kutholakala cishe imizuzu eyi-15 ukusuka enkabeni yeSanúcar de Barrameda, lolu lwandle lukulungele ukujabulela ukugeza okuhle, unqamule futhi uxhumane nemvelo.
Yize ingenazo izinsizakalo nezinsiza eziningi, ubuhle bendawo buyenzela yona. Imvamisa ababaningi abantu, ngakho-ke ukuthula kuqinisekisiwe, futhi ukubuka ukushona kwelanga kuphumule esihlabathini kuwumbukwane wangempela. Vele, uma uya kuleli bhishi ngincoma ukuthi ugqoke amabhuzu, kunamadwala futhi lolu hlobo lwezicathulo luzosiza indlu yakho yokugezela ingonakali.
IPlaza del Cabildo
IPlaza del Cabildo yinhliziyo yeSanúcar de Barrameda, Amabha, amasimu nezindawo zokudlela kusatshalaliswa nxazonke zawo futhi ingxenye enkulu yomkhathi igxilile. Umthombo ophakathi nendawo kanye nemithi yesundu emikhulu ekhula ngaphakathi kwesikwele, iyenza ibe yindawo eyingqayizivele futhi, ngaphandle kokungabaza, ibe ngesinye sezimpawu zendawo.
Kugcwele impilo futhi Uma ufuna ukwazi isiko lama-tapas, le ndawo yiyo okufanele ukwenze. Labo abanezinyo elimnandi bazophinda bathole uhlelo lwabo oluphelele lapha, ngoba phakathi kwabantu bendawo abazungeze isikwele uzothola ezinye zezindawo ezihamba phambili ze-ayisikhilimu eSanúcar de Barrameda.
Njengakwamanye amadolobha amaningi asogwini, Ukudoba kungenye yezinto ezindala futhi ezifanele kakhulu eSarlúcar de Barrameda. Ukwazi ukuhweba ngezinhlanzi kuyindlela enhle kakhulu yokufaka isiko lamaSanlucan. Ngalokho akukho okungcono kunokuya ku- Imakethe yeBonanza.
Etholakala eduze netheku, imakethe yezinhlanzi iyisikhungo sebhizinisi lokudoba kuleli dolobha. Ihlukaniswe izindawo ezimbili, enye inikezelwe ukuthengiswa kwezinhlanzi ezikhishwa esikhwameni semali kanti enye inikelwe ekubambiseni. Indali yezinhlanzi, ngokungangabazeki, ingenye yemibukiso eyiqiniso kunazo zonke yokuthi ungafakaza ngesikhathi uvakashele eSanlúcar. Kuhanjelwa abadayisi bezinhlanzi kanye namabhizinisi endawo afuna isivuno esisha esihle kakhulu. Uma ufuna ukuthola ingqikithi yedolobha, unga futhi iya esikhunjeni lapho ubona khona inhlanzi ithula impahla
Vakashela iDoñana National Park usuka eSanúcar
Ipaki Likazwelonke laseDoñana Ingenye yezindawo ezibaluleke kakhulu ezivikelekile eSpain. Lesi siqiwu sakhiwe yizinhlobonhlobo eziningi zemvelo eziyinikeza ukuhlukahluka nomhlaba ocebile ohlukile eYurophu. ISanúcar de Barrameda inenhlanhla yokuba seduze kakhulu kwepaki futhi Ukuvakashelwa eDoñana kuhlelwe kusuka edolobheni. Uma ufuna ukubona okuthile okungaphezu kwezikhumbuzo futhi ungathanda ukujabulela imvelo engonakalisiwe kakhulu, ukubhuka olunye lwalezi zivakashi kungumbono omuhle.
Ipaki lifinyelelwa ngesikebhe, ngeGuadalquivir Futhi, yize ukuhamba ngasemfuleni sekuvele kuyisimangaliso, uma ufuna ukwazi yonke imvelo yaseDoñana, ungaqasha nensizakalo yezindawo zonke, evame ukufaka umhlahlandlela okhethekile, ongavakashela naye wonke amakhona alokhu ingcebo yemvelo.
Izikebhe zisuka olwandle lwaseBajo de Guía ziwele iGuadalquivir ziye ogwini lwesiqiwu semvelo. Lapho lapho, se qhubeka nemoto esendaweni yonke bese uqala uhambo lokudabula izindawo eziheha kakhulu zaseDoñana: amabhishi, izindunduma zesihlabathi esimhlophe, kuyagcinwa, amaxhaphozi ... Umzila uphela ku- «La Plancha», idolobha elidala lapho kwakuhlala khona izakhamuzi ezake zahlala epaki.
Isikebhe sizokuphonsa sibuyele eSanlúcar, ukuze uqhubeke nokuzijabulisa edolobheni. Ngakho-ke manje uyazi, uma ungazi ukuthi yini ongayibona eSanúcar de Barrameda, khumbula ukuthi enye inketho ukuhlola okuzungezile futhi Ungenza lolu hambo ngosuku olulodwa nje.
IFlamenco ingesinye sezici zamasiko ezimele kakhulu e-Andalusia. Noma kunjalo, kunamadolobha okuphefumulelwa kuwo lolu hlobo lomculo kuwo wonke amakhonaISanlúcar de Barrameda ingelinye lalawo madolobha.
Ukujabulela ukucula nokudansa, ESanlúcar kunabantu bendawo abakhethekile ekudluliseni nasekuboniseni ubuciko balawa mazwe. Uma ufuna ukusondela kusiko laseSanúlcar, awukwazi ukusuka ngaphandle kokuvakashela enye yamaphinathi futhi usalokhu unikeza lolu hlobo lwemibukiso (futhi engikunikeza eminye imininingwane engezansi).
Ngingabona kuphi umbukiso we-flamenco eSanúcar de Barrameda?
Kusekhona Ukuphila Ukubuyela Emuva
Kutholakala eCalle San Miguel, uhambo lwemizuzu nje emithathu ukusuka ePalais d'Orléans, lokhu ukuxubana kwethaveni yendabuko ne-tablao kunikeza izivakashi ithuba lokujabulela umbukiso oyingqayizivele we-flamenco, owenziwa ngu abaculi abaqeqeshiwe, ngenkathi unambitha izitsha ezijwayelekile zendawo.
Iklabhu leFlamenco iPuerto Lucero
Cishe ngamamitha angama-300 ukusuka eCastillo De Santiago, eCalle de la Zorra, yiPeña Flamenca Puerto Lucero. Le nhlangano yamasiko engenzi nzuzo uhlela imibukiso ye-flamenco. Ukuhlanganisa abaculi bakule ndawo nokusiza amakhono amasha, i-peña ilwela ukukhombisa ukuthi i-flamenco iyifa eliphilayo laseSarlúcar futhi bazama ukudlulisa uthando lwalobu buciko kuwo wonke umuntu oza kwi-tablao yabo.
Igumbi leRociera El Rengue
ITapas, iziphuzo nomculo obukhoma, iSala Rociera El Rengue iyindawo ekahle yalabo abafuna ukuzijabulisa eSanlúcar kusuka kuBarrameda kuya kwisigqi sama-rumbas nama-sevillana. Etholakala kwi-calle de las Cruces, le ndawo inikeza umoya okhululekile ozokuvumela ukuthi usondele ku-flamenco ngendlela eyiqiniso nehlukile.
Izitolo zewayini zaseSanúcar
Ukukhiqizwa kwewayini, ngokomlando, kungumsebenzi obalulekile wezomnotho weSanlúcar de Barrameda. Yize kukhona ama-winery athengisa iwayini avela emaqenjini ahlukahlukene (iJerez, iVinagre neBrandy de Jerez), IManzanilla yiyona ebilokhu ihlotshaniswa nesiko laseSanúlcar.
Es elinye lamawayini akhetheke kakhulu emhlabeni, Unomlingiswa oyingqayizivele futhi kungumhlaba lapho azalelwa khona okuwunikeza ngama-nuances athile. Ikona ekahle ukuhambisana nesivivinyo, Kudliwa kubanda (phakathi kuka-5º no-7º C) futhi kubhangqwa kahle nakho konke ukudla okuvela olwandle futhi, ngenhlanhla iSanlúcar inikela ngezinto ezinhle kakhulu ezingavuthiwe, imikhiqizo esezingeni eliphakeme futhi ephezulu.
Nginesiqiniseko sokuthi sengivele ngakuqinisekisa ukuthi uzame ingilazi ye-Chamomile, kodwa… Ubungeke uthande ukwazi ukuthi itholakala kanjani? Ukuvakasha kwewayini kuyindlela enhle kubathandi bewayini abeza ukuchitha izinsuku ezimbalwa edolobheni. Kunama-wineries ahlela ukuvakashelwa kwabavakashi futhi lapho ezochaza khona yonke inqubo yokukhiqiza yesiphuzo esiphenduke uphawu lweSanúlcar.
Amanye ama-wineries ahlela ukuvakashelwa ezikhungweni zawo
IBodegas Hidalgo La Gitana
Kusungulwe ku-1972, IBodegas Hidalgo La Gitana yibhizinisi lendabuko elidluliselwe lisuka kubaba laya endodaneni. Udumo lwabo baludalula ngomkhiqizo wabo wezinkanyezi: "La Gitana" Manzanilla, enye yezinto ezaziwa kakhulu eSanlúcar de Barrameda.
Hlela ukunambitheka nsuku zonke nezinhlobo ezahlukahlukene zohambo oluqondisiwe. Ukubhuka kungenziwa kusuka kuwebhusayithi yabo futhi amanani entengo impela.
IBodegas La Cigarrera
Ukukhuluma ngeManzanilla «La Cigarrera» kuyafana nesiko. Imvelaphi yale ndawo ethengisa iwayini kuthiwa yenziwa ngumthengisi waseCatalan owagcina esehlala eSarlúcar, uMnu. Joseph Colóm Darbó, kwathi ngo-1758 wasungula indawo yokugcina iwayini endaweni eseCallejón del Truco.
Namuhla, eminyakeni engaphezu kwengu-200 kamuva, ibhizinisi selikhule lenza «La Cigarrera» elinye lamaManzanillas athengiswa kakhulu. Ukuletha isiko leLa Manzanilla eduze nomphakathi jikelele nokudlulisa uthando lwamasiko nomlando waseSanlucan, abanikazi be-winery banquma ukuyivulela umphakathi, banikela Uhambo oluqondiswayo lwezikhungo futhi kufaka phakathi kuyo a ukunambitha iwayini labo elihamba phambili. Ukubhuka kungenziwa ngokuthintana nabanikela kuwebhusayithi yabo.
Kuvulwe ngo-1821, iBodegas Barbadillo ayinikezi ukuvakasha okuqondisiwe kuphela kwezindawo nokunambitheka, kepha futhi Banomnyuziyamu onikezelwe emlandweni nasekukhiqizeni iManzanilla eSarlúcar. Phakathi kwemiphongolo, bazokudlulisela uthando lwalokho abakuchaza "njengendlela yokuphila" futhi bazokusondeza kusiko lendawo ngendlela eyingqayizivele.
ILa Manzanilla Solear yiwayini elidume kakhulu e-winery futhi sekudume ngokugqoka nokugqwayiza ingxenye enkulu yemikhosi yendabuko yase-Andalusia.
Ungadla kuphi eSanúcar de Barrameda
I-Gastronomy ingenye yezindawo ezinhle kakhulu zokuheha izivakashi endaweni. ISanlúcar idume ngokunikela ngokudla kwasolwandle okuhle kakhulu, ngokuba i-prawn umkhiqizo wayo wenkanyezi. Ukunambitheka kwezinhlanzi, ubumnandi bokuthosa ukuthosa okwenziwe kahle kanye nokudla kwasolwandle okubhangqwe newayini, kwenza iSarlúcar gastronomy imele isiko lokupheka laseCádiz.
Ukuze ungahambi ngaphandle kokujabulela ukudla okuhle kweSanlúcar de Barrameda, ngethula ezinye zazo imigoqo nezindawo zokudlela ezilinganiswe kakhulu edolobheni.
Indawo yokudlela yaseCasa Bigote
Etholakala eBajo de Guía, Le ndawo yokudlela ivulwe kusukela ngo-1951 futhi ingenye yalezo zindawo eziwuphawu lwamasiko nokwenza kahle. Ukunikezwa kwayo kwe-gastronomic kusekelwe emikhiqizweni yasendaweni, izinhlanzi zasolwandle nezinhlanzi ezintsha zekhwalithi ephezulu kakhulu, ziphekwe kahle futhi zisesimweni esiyingqayizivele.
Ibha Casa Balbino
Okuqale njengesitolo, namuhla kungenye yezindawo zokukhomba eziseSarlúcar de Barrameda. Ama-omelette amahle kakhulu emfanzi alungiswa emakhishini abo anqobe isisu sabantu bakuleli nabangaphandle. Ukuhlonishwa komkhiqizo nokudla okujwayelekile kwendawo yizinsika ezixhasa ukunikezwa kwazo okuhle kakhulu kwe-gastronomic nempumelelo yayo.
Uma ungomunye walabo abathanda ubuqiniso, le ndawo izokuthakazelisa. Kude nokuxokozela kwalesi sikhungo, le thaveni yiyona ejwayelekile okuya kuyo abantu bendawo. Ngokubona kwami, uRincón Bético unikeza izinhlanzi ezithosiwe kakhulu edolobheni, ezintsha, ezinomhlwenga futhi ngentengo enkulu. Yonke i-cuttlefish ethosiwe iyisitsha sayo sezinkanyezi, okunzima ukusithola kwezinye izikhungo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » General » Yini ongayibona eSarlúcar de Barrameda
Ithempeli laseLuxor eGibhithe